Qalabka dib u warshadaynta qashinka iyo khadka wax soo saarka
Qalabka dib-u-warshadaynta qashinka dhismaha iyo khadka wax soo saarka Shiinaha ayaa hadda ku jira heer sare oo magaalo-magaalo, iyada oo ay soo saaraan wax soo saar ballaadhan oo sanadle ah qashinka dhismaha, inta badanna ay ka mid yihiin shubka, lebenka, birta, dhalooyinka iyo jajabka qoryaha ....
Sidee loo sameeyaa shaqo wanaagsan oo ah shaqada dayactirka dhagaxshiidka?
Sidee loo sameeyaa shaqo wanaagsan oo ah shaqada dayactirka dhagaxshiidka? Mashiinka waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa birta, qalabka dhismaha, warshadaha kiimikada, macdanta iyo qaybaha kale ee wax soo saarka macdanta iyo qalabka wax lagu shiido.
Qaab dhismeedka aasaasiga ah iyo habka shaqada ee miraha
Qaab dhismeedka aasaasiga ah iyo habka shaqada ee milkiilaha loo isticmaalo warshadda badanaa waa qaab dhismeedka isku dhafan, taas oo ah, qalab leh laba nooc oo isbarbar socda oo farsamo shaqeed madax bannaan. Mileha ayaa inta badan ka kooban gri ...